2 Ihe E Mere 35 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Abụọ 35:1-27
Josaya haziri Ememme Ngabiga pụrụ iche (1-19)
Fero Niko eze Ijipt gburu Josaya (20-27)
35 N’abalị iri na anọ n’ọnwa mbụ,+ Josaya meere Jehova Ememme Ngabiga+ na Jeruselem. Ha gbukwara anụ ndị e ji chụọ àjà maka Ememme Ngabiga+ n’ụbọchị ahụ. 2 Josaya gwara ndị nchụàjà ihe bụ́ ọrụ ha, gbaakwa ha ume ka ha na-arụ ihe ha kwesịrị ịna-arụ n’ụlọ Jehova.+ 3 Ọ gwakwara ndị Livaị ndị na-ezi ndị Izrel niile ihe,+ ndị dị nsọ n’anya Jehova, sị: “Dọsanụ Igbe ahụ dị nsọ n’ụlọ ahụ Solomọn nwa Devid eze Izrel rụrụ.+ Unu ebuzila ya n’ubu unu.+ Jewerenụ Jehova bụ́ Chineke unu na ndị ya bụ́ Izrel ozi. 4 Kwadebekwanụ n’ọnụmara n’ọnụmara nakwa n’ìgwè n’ìgwè ịrụ ọrụ Devid+ eze Izrel na Solomọn nwa ya dere na unu ga na-arụ.+ 5 Guzoronụ n’ebe nsọ n’ọnụmara n’ọnụmara, otú ọ ga-abụ, a bịa n’ọnụmara nke ọ bụla n’Izrel, e nwee ezinụlọ ndị si n’ebo Livaị ga na-ejere ha ozi. 6 Gbuonụ anụ ndị a ga-eji chụọ àjà maka Ememme Ngabiga,+ dookwanụ onwe unu nsọ. Haziekwanụ ihe otú ụmụnne unu ga-enwe ike ime ihe Jehova si n’ọnụ Mosis kwuo.” 7 Josaya nyere ndị Izrel ebule na mkpi dị puku iri atọ (30,000) nakwa puku ehi atọ (3,000), ka e jiri ha chụọ àjà n’Ememme Ngabiga maka ndị niile bịaranụ. Ihe ndị a eze nyere si n’akụ̀ ya.+ 8 Ndị o mere ndị isi nyekwara ndị Izrel, ndị nchụàjà, na ndị Livaị onyinye. Hilkaya,+ Zekaraya, na Jehayel, bụ́ ndị isi n’ụlọ ezi Chineke, nyere ndị nchụàjà ewu na atụrụ dị puku abụọ na narị isii (2,600), nakwa narị ehi atọ (300), ka e jiri ha chụọ àjà n’Ememme Ngabiga. 9 Konanaya na ụmụnne ya, bụ́ Shemaya na Netanel, nakwa ndị isi ndị Livaị, bụ́ Hashabaya, Jeayel, na Jozabad, nyere ndị Livaị ewu na atụrụ dị puku ise (5,000), nyekwa ha narị ehi ise (500), ka e jiri ha chụọ àjà n’Ememme Ngabiga. 10 Mgbe a kwadebechara ihe niile, ndị nchụàjà gara guzoro ebe ha kwesịrị iguzo, ndị Livaị agaakwa guzoro n’ìgwè ha dị iche iche,+ otú eze gwara ha ka ha mee. 11 Ha gburu anụ ndị ahụ a ga-eji chụọ àjà n’Ememme Ngabiga,+ ndị nchụàjà fesakwara ọbara ha n’elu ebe ịchụàjà,+ ndị Livaị ana-agba ha akpụkpọ.+ 12 Ha kwadebekwara anụ ndị ahụ a ga-eji chụọ àjà a na-esu ọkụ buru ha bunye ndị Izrel, ndị nọ n’ọnụmara n’ọnụmara, ka ha jiri ha chụọrọ Jehova àjà otú e dere n’akwụkwọ Mosis ka a na-eme. Otú ahụ ka ha mekwara ehi ndị ahụ. 13 Ha hụrụ anụ ndị a ga-eji chụọ àjà n’Ememme Ngabiga ahụ n’ọkụ dị ka a na-eme.+ Ha jikwa ụdị ite dị iche iche sie ihe ndị dị nsọ. Mgbe ha mechara, ha buteere ya ndị Izrel niile ọsọ ọsọ. 14 Ha kwadebekwara anụ ndị e ji chụọ àjà Ememme Ngabiga maka onwe ha nakwa maka ndị nchụàjà, n’ihi na ndị nchụàjà, bụ́ ụmụ ụmụ Erọn, nọ na-achụ àjà a na-esu ọkụ, na-achụkwa abụba anụ n’àjà ruo abalị. Otú a ka ndị Livaị si kwadebere onwe ha anụ ndị ahụ, kwadebekwara ndị nchụàjà, bụ́ ụmụ ụmụ Erọn. 15 Ụmụ Esaf, ndị na-abụ abụ,+ nọkwa ebe ha kwesịrị ịnọ, bụ́ ebe Devid, Esaf, Himan, na Jedutọn onye na-ahụrụ eze ọhụụ kwuru ka ha na-anọ.+ Ndị na-eche nche n’ọnụ ụzọ ámá nọkwa n’ọnụ ụzọ ámá dị iche iche.+ Ha ahapụghị ọrụ ha n’ihi na ndị Livaị, bụ́ ụmụnne ha, kwadebeere ha anụ ndị e ji mee Ememme Ngabiga. 16 Otú a ka e si kwadebe ihe niile Jehova chọrọ ka a kwadebe n’ụbọchị ahụ maka Ememme Ngabiga ahụ+ nakwa maka ịchụ àjà a na-esu ọkụ n’ebe ịchụàjà Jehova, otú Eze Josaya kwuru ka e mee.+ 17 Ndị Izrel bịaranụ so mee Ememme Ngabiga n’oge ahụ, meekwa Ememme Achịcha Na-ekoghị Eko ụbọchị asaa.+ 18 E metụbeghị ụdị Ememme Ngabiga a n’Izrel kemgbe oge Samuel onye amụma. O nwetụbeghịkwa eze Izrel ọ bụla ọzọ mere ụdị Ememme Ngabiga a Josaya mere.+ Ndị so ya mee ya bụ ndị nchụàjà, ndị Livaị, ndị Juda na ndị Izrel niile bịaranụ, nakwa ndị bi na Jeruselem. 19 E mere Ememme Ngabiga a n’afọ nke iri na asatọ n’ọchịchị Josaya. 20 Mgbe ihe a niile mechara, Josaya edozichaakwa ụlọ nsọ* ahụ, Niko+ eze Ijipt bịara ka ọ lụso Kakemish nke dị n’akụkụ Osimiri Yufretis agha. Josaya gaziri ka ọ lụso Niko agha.+ 21 N’ihi ya, o zigaara Josaya ndị ozi, sị ya: “Eze Juda, gịnị mere i ji bịa ịlụso m agha? Ọ bụghị gị ka m bịara ịlụso agha taa, kama m bịara ịlụso mba ọzọ agha. Chineke gwakwara m ka m ghara igbu oge. Laghachi maka ndụ gị. Chineke nọnyeere m. Emegidezila ya, ka ọ ghara ịla gị n’iyi.” 22 Ma, Josaya alaghachighị, kama o jigharịrị ejiji ka a ghara ịmata na ọ bụ ya.+ O geghị ntị n’ihe Chineke si n’ọnụ Niko gwa ya. Ọ gawara ịlụso ya agha na Ndagwurugwu Megido.+ 23 Ndị na-agba ụta wee gbata Eze Josaya akụ́, ya asị ndị na-ejere ya ozi: “Bupụnụ m ebe a, n’ihi na e merụọla m ezigbote ahụ́.” 24 Ndị na-ejere ya ozi wee si n’ụgbọ ịnyịnya ya kutuo ya ma jiri ụgbọ ịnyịnya agha ya nke abụọ bute ya Jeruselem. Ma o mechara nwụọ, e lie ya ebe e liri nna nna ya hà.+ Ndị Juda na ndị niile bi na Jeruselem rukwaara ya uju. 25 Jeremay+a bụrụ abụ o ji ruoro Josaya uju. Ụmụ nwoke niile na ụmụ nwaanyị niile ndị na-abụ abụ+ na-abụkwa abụ ndị ha ji eruru Josaya uju ruo taa. E kpebiri ka a na-abụ abụ ndị a n’Izrel. E dekwara ha n’akwụkwọ e dere abụ iru uju. 26 E dere akụkọ ndị ọzọ gbasara Josaya n’akwụkwọ, ma otú o si debe Iwu Jehova, nke gosiri na ọ hụrụ ya n’anya, 27 ma ihe ndị ọzọ o mere, malite ná mbido ruo ná ngwụcha. E dere ha n’akwụkwọ gbasara ndị eze Izrel na Juda.+
^ Na Hibru, “ụlọ.”
2 Ihe E Mere 35